Operator Notes- PDS(Plant Design System V.7)
Operator Notes- PDS(Plant Design System V.7)
Thread: Operator Notes- PDS(Plant Design System V.7)
03-13-2010 11:35 PM #1
PDS မှာ model file အသီးသီးကို ဖန်းတီချင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်သလဲ
Project Administrator&gt;Project Environment managner&gt;Create or copy ပါ.။ Create ဆိုရင်တော့ Database table ပါ Create လုပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်. နို့မို့ဆို model file ပေါ်မလာပါဘူး
Icon တွေကို Border တပ်ချင်ရင်
User preference&gt;Tools&gt;Borderless icon ကို uncheck
FW မှာ Propagate ဘာလို့လုပ်ရတာလဲ..ဘယ်လိုလုပ်သလဲ
&quot;FW မှာ ပုံတွေဆွဲပြီးရင် propagate လုပ်မှာ model file မှာ solid အဖြစ်မြင်ရမှာပါ။ sparse ဆိုတာ အရိုးတံပါ။ လုပ်ပုံလုပ်နည်းက
(၁) Model file မှာ FW Toolbar &gt;View&gt;Set&gt;Isometric ကိုရွေးထား။ ပြီးရင် FW toolbar&gt;view&gt;Freeze ကိုရွေးပါ။
(၂)Isometric ရွေးခဲ့တဲ့ view မှာ data ချ။
(၃)&quot;&quot;For freeze file type&quot;&quot; မှာ &quot;&quot;select&quot;&quot; ကိုနှိပ်
(၄) File name ကို ရိုက်။ FWP က နာမည်အတိုင်းပဲရိုက်။ extension က .prp ဖြစ်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ ပြီးရင် OK.&quot;
FWP မှာ Split လုပ်တာဘယ်အပိုင်းကိုလုပ်တာလဲ
နောက်ဆုံးမှတ်တဲ့အပိုင်းကိုပါ။ ဒီတော့ Intersection နဲ့ ရွေးတဲ့အခါ ဖြတ်ချင်တဲ့အပိုင်းကို နောက်ဆုံးမှ ရွေးပါ။
FWP မှာ Copy ကူးရင် Pick point (or) Origin point ဘယ်နှစ်ကြိမ်လိုအပ်ပါသလဲ။
Rotate member လုပ်ပြပါ။
Rotate member tool ကို အရင်ရွေး။ Buffer ထဲမှာ centre point နဲ့ degree ဝင်သွားအောင် အရင်လုပ်။ ပြီးတော့မှ ပြန်ဝင်ပြီး select member လုပ်ပါ။
FWP မှာ MS က ဖိုင်တွေကိုဘယ်လို reference လုပ်နိုင်ပါသလဲ။
MS မှာ Reference လုပ်သလို လုပ်နိုင်ပါတယ်။
The Following User Says Thank You to သက်နိုင်ထွန်း For This Useful Post:
03-13-2010 11:37 PM #2
ပြန်စာ -> Operator Notes- PDS(Plant Design System V.7)
Equipment တစ်ခုတည်းကိုပဲ View အသီးသီးကကြည့်လို့ရပါသလား
ရပါတယ် (A)Window Center နဲ့ကြည့်နိုင်သလို (B)View equipment နဲ့လည်းကြည့်နိုင်ပါတယ်
EQP မှာ exit လုပ်တဲ့အခါ Window အရွယ်အစားကိုသိမ်းပါသလား။
Tools အနေအထား တွေကိုသိမ်းပါသလား။
သက်ဆိုင်ရာ PC မှာပဲသိမ်းပါတယ်။
View settings တွေကိုသိမ်းပါသလား။
သိမ်းပါတယ်။ Rendering ရောပေါ့။
EQP မှာ Rotate လုပ်ပြပါ။
&quot;(၁)Rotate tool ကိုရွေးပါ။ ပြီးရင် Identify equipment.(Equipment ကိုရွေး)
(၂)Identify point on rotation axis. (Axis အတွက် စမှတ်ကိုပေးပါ)
(၃)Enter Rotation Angle ဆိုရင် (Default ပေးထားတဲ့ Orientation Tee ရဲ့ အနေအထားကိုကြိုက်ရင်) Degree ရိုက်ထည့်ရုံပါ။ မကြိုက်သေးရင် ဒီအချိန်မှာ Rotation axis အတွက် Second point ကို ပြင်နိုင်ပါတယ်။&lt;T&gt;&lt;D&gt; ပေးပြီး (သို့) Refresh Tee ကနေပေါ့။&quot;
EQP မှာ Multiple Equipments ကို MS ကိုမသုံးပဲနဲ့ရွှေ့လို့ရပါသလား။
ရပါတယ်။ (၁) MS ကို Switch လုပ်ပါ။ (၂) Fence ဖြင့် Select လုပ်ပါ။ (၃) Eqp ကို ပြန် Switch ပါ။ (၄)Equipment Move ကိုယူပါ။ (၅) Fence operations မှာပေါ်လာတဲ့ prompt အတိုင်း လိုသလို handle လုပ်ပါ။ Equipment တွေကို ဒီအချိန်မှာ ရွေးလို့ရတယ်။ ပြီးတော့ Fence ထဲမှာ မပါခဲ့တာတွေကိုလည်း ထပ်ထည့်လို့ရတယ်(၆) Assign the destination to be moved.
EQP မှာ Orientation Tee ကို Pipe Designer လိုကြိုက်သလိုထားလို့ ရပါသလား။
ရပါတယ်။ “Orient Primary by2points” နဲ့ ထားလို့ရပါတယ်။
EQP မှာ Handrail ဘယ်လိုတတ်သလဲ။
Parametric help&gt;Access appurtenance&gt;Handril A. ပြီးတော့ Select points ကိုနှိပ်ပြီး ချမဲ့ point တွေကိုမှတ် ။ ပြီးရင် Right click နှိပ်။ ပြီးရင် Accept. မှတ်ချက်။ ။Handrail က Revise လုပ်ရတာ အဆင်မပြေပါ။
EQP မှာ irregular တွေကို ဘယ်လိုဆွဲနိုင်လဲ။
တစ်စချင်းစီ ပေါင်းခြင်းဖြင့် ဆွဲနိုင်သလို Custom shape ကိုဆွဲပြီး Project လုပ်ခြင်းဖြင့်လည်း ဆွဲနိုင်ပါတယ်။
Eqp မှာ Categories အလိုက် View on/off လုပ်နိုင်ပါသလား။
Equipment ကို ဘယ်လိုရှာနိုင်ပါသလဲ
Equipment&gt;Integrated command&gt;Window to named item နဲ့လည်းရသလို View equipment နဲ့လည်းရပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက Add to Equiment မှာ နာမည်ရိုက်ထည့်ပြီးရှာလည်းရပါတယ်.
Equipment ကို copy / move လုပ်လို့ရှိရင် ချချင်တဲ့နေရာကို ချလို့ရအောင် ဘယ်လိုလုပ်နိုင်ပါသလဲ။
&lt;T&gt; အရင် ဖမ်းလို့ရတဲ့ နေရာကို ဖမ်းပြီးမှ ကိုယ်ချချင်တဲ့နေရာကို &lt;T&gt;&lt;D&gt; လုပ်ပြီးဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။
Equipment မှာ mirror လုပ်ပြပါ။
(၁)Tool ကိုယူပါ။ (၂)identify equipment ဆို identify လုပ်။ (၃)identify point on mirror plane ဆိုရင် identify point on mirror plane လုပ်။ (၄)Orient Mirror plane ဆိုရင် Mirror plane က ဘယ်ဘက်လှည့်မှာလဲဆိုတာကိုရွေး(မှတ်ချက်။ ။ Primary axis သည် mirror plane ကိုထောင့်မတ်ကျပါသည်။) (၅) Accept ဆိုတဲ့ command prompt မပါ၍ သက်ဆိုင်ရာ palette မှာ Accept ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
Equipment မှာ Model file ကို ဘယ်လိုသိလဲ
MS ဘက်ကို ခဏပြောင်းကြည့်ရင် model file name ကိုမြင်နိုင်ပါတယ်။
EQP မှာ MS ဘက် delete tool တွေကို သုံးနိုင်ပါသလား
သုံးနိုင်ပါတယ်။ မသုံးသင့်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Graphic အရ ပျက်သွားပြီး Data အရကျန်နေသေးလို့ပါ။
Equipment မှာလိုချင်တဲ့နေရာကိုသွားနိုင်ပါသလား..ပြီးတော့ လိုချင်တဲ့ပွိုင့်ကနေ စဆွဲလို့ရအောင်လုပ်နိုင်ပါသလား
ရပါတယ်..ပွိုင့်သွားတဲ့အချိန်မှာ Precision point palette က command တွေသုံးလို့ရပါတယ်…Construction point ကို သုံးကြည့်ပါ…ကျန်တာတွေလည်းကောင်းပါတယ်…
03-13-2010 11:40 PM #3
Operator Notes- PDS(Plant Design System V.7)> Pipe Designer
Model file ခွဲတာတွေ ကူးတာတွေ Area file ခွဲတာတွေ ဘာလို့လုပ်တာလဲ
&quot;Area တစ်ခုမှာ model file အများကြီးရှိပါတယ်။ Project တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံး အလုပ်လုပ်မဲ့ Area တွေခွဲလိုက်ပါတယ်။ Area တစ်ခုစီမှာမှ Model file တွေထပ်ခွဲပါတယ်။ ဘာလို့ Model file တစ်ခုထဲ မထားတာလဲဆိုတော့ Model file တစ်ခုကို တစ်ကြိမ်မှာ တစ်ယောက်ပဲ သုံးနိုင်လို့ပါ။ ပြီးတော့ Model file တစ်ခုကို memory size ကန့်သန့်ချက် ရှိပါတယ်။
Model file အများကြီးခွဲထားတော့ လူအများကြီး တစ်ပြိုင်နက် သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ မြန်ပါတယ်။ လူအများကြီး သုံးနိုင်ဖို့ ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲ ခွဲထားတာဖြစ်လို့ Extract လုပ်ရင် Area ပဲ ရွေးပေးရပြီး Model file ရွေးပေးဖို့ မလိုခဲ့ဘူးဆိုတာ သတိပြုမိမှာပါ။
ဒီတော့ ပိုက်လိုင်းတစ်ခုကို Model file ဘယ်နှစ်ခုကပဲ ကိုင်တွယ်နေပါစေ extract လုပ်ရင်တော့ တစ်လိုင်းတည်းပဲ ထွက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် model file တစ်ခုမှာ Failure ဖြစ်နေရင် ကိုယ်ဆွဲနေတဲ့ model file က ဘယ်လောက်ပဲ အမှားကင်းစေဦးတော့ အခြား Model ဖိုင်မှာ errorတက်ရင်extract မရပါဘူး&quot;
&quot;ဒါကြောင့် Model file သုံးလေးခုမှာ ပါဝင်ပက်သက်နေတဲ့ Pipeline ဆွဲပြီဆိုရင် Model file အချင်းချင်း consistency ရှိဖို့လိုပါတယ်။ သို့မှသာ disconnect ဖြစ်ခြင်း Not found ဖြစ်ခြင်းကို ရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် Pipeline တစ်ခုကို ဆွဲပြီဆိုရင် အခြား model file မှာ ရှိနေပြီးသားဆိုရင် အဆိုပါ model file ကို reference လုပ်။ connect to designနဲ့ဆွဲပေးဖို့ လိုပါတယ်။&quot;
Pipe မှာရှိတဲ့ Assembly တွေကို မထိခိုက်ပဲ ရွှေ့ပြပါ။
Move Pipe Assembly ကိုရွေးပါ။ Assembly ရဲ့ Connect Point ကိုရောက်အောင်သွားပါ။ ပြီးပါက ရွေ့လိုသော တန်ဖိုးကို ရိုက်ပါ။ တန်ဖိုးအတိုင်းရွေ့ချင်တာ မဟုတ်ဘဲ ကြားထဲရှိ ပိုက်တစ်ခုလုံးကို ဖျက်ပစ်ရန် ဆိုပါက Move by deleting pipe ကိုရွေးပေးပါ။
(1)Coordinate သိရင်လည်းရပါတယ်။ (2)ပွိုင့်ကိုညွှန်ပြနိုင်ရင်လည်းရပါတယ်။ (3)ပွိုင့်တစ်ပွိုင့်ရဲ့လိုချင်တဲ့တန်ဖိုးကိုပဲ Snap ဖမ်းပြီးလုပ်ရင်လည်းရပါတယ်။ (Move to Easting,Norting,Elevation) ပါ။ (4)ရွေ့မယ်ပမာဏပဲ သိရင်လည်းရပါတယ်
Pipe Run တွေကိုရွှေ့ပြပါ။
Move Pipe Run ကိုသုံးပါ။ ဒီဟာသုံးရင် တစ်ခုသတိထားရမှာက ရွှေ့တဲ့ပမာဏ အတွင်းမှာ အခြား Assembly ရှိရင် Assembly နောက်ပိုင်း pipe ကို telescope လုပ်သွားလိမ့်မယ်။
Move Pipeline End သုံးပြပါ
Move Pipeline End ကို ပိုက်အဆုံး (Flange ဖြင့်ဆုံးပါကလည်းရ) ကနေ ကိုင်ပြီး ရွေ့တာပါ။ သူက Move Pipe Run ဂုဏ်သတ္တိရှိပါတယ်။
Connect to Design &gt; Move from active point ဆိုတာဘာလဲ
Connect to Design &gt; Move from reference point ဆိုတာဘာလဲ
Connect to Design &gt; Point on segment ဆိုတာဘာလဲ
Connect to Design &gt; Point on pipe ဆိုတာဘာလဲ
Reference file ကနေ ပိုက်ကို ဘယ်လိုcopyကူးသလဲ
Reference တွဲပြီးပါက Reference file က ပိုက်ကိုပဲ identify လုပ်ပေးပါ. Active model ကိုလုပ်ပါက ref က ပိုက်တွေ မပါပါ. နံမည်နဲ့ ကူးချင်လည်း ရပါတယ်. နာမည်နဲ့ကူးချင်ရင်တော့ Active group &gt; Search criteria segment ကနေသွားပါ. နာမည်ရိုက်ထည့်ပါ. ပြီးရင် View (or) Model ကိုရွေးပါ. pipe တစ်ပိုက်ကို ref ပေးပါ.
Segment ပေါ်မှာ Concentric reducer တပ်ပြပါ
Place&gt;Connect to Design&gt;Point on Segment ကနေ လိုချင်တဲ့နေရာသွားပါ။ အဲဒီမှာ Concentric Reducer ကိုတန်းတပ်နိုင်ပါတယ်။
Segment ပေါ်မှာ Eccentric Reducer ကိုတပ်ပြပါ။
Move Pipe Run&gt;Insert Eccentric reducer ကိုသွားပါ။ ပေါ်လာတဲ့ Prompt အတိုင်းလုပ်ပါ။
Not found ကို ဘယ်လိုပြင်မလဲ
Not found ဖြစ်တာက segment တွေရွေ့သွားလို့ပါ။ ပြီးတော့ segment တွေ့ ရွေ့မိပြီး ပြန်တေ့ပေးလည်း မရတော့ပါဘူး။ Design နဲ့ connect မဖြစ်တော့တာပါ။ ဒီတော့ နောက် Area ကနေ reference ခေါ်ပြီး reference ကနေ connect to design လုပ်ပြီး ဆွဲရင်မဖြစ်တော့ပါဘူး။ Ref တွဲရင် တစ်ခုသတိထားရမှာက snap တွေ locate တွေကို on ထားဖို့လိုပါတယ်။
Set display depth ကိုသုံးပြပါ။
ကိုယ်ကြည့်ချင်တဲ့ depth ကိုပဲ ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒီ command ကို သုံးရပါမယ်။ Set display depth ကိုနှိပ်ပြီး ကိုယ်ကြည့်ချင်တဲ့ အနက်တန်ဖိုးကို view တစ်ခုကနေ Graphically ထောက်ပြနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ. Top view ကနေ ကြည့်ချင်တာဆိုရင် Front view (or) North view ကနေ Graphically ထောက်ပါ။
Fluid code သိရုံ၊ Unit code သိရုံ၊ Service Class သိရုံ၊ Pipe length သိရုံနဲ့ ရှာလို့ရပါတယ်။ Pipe length သိရုံနဲ့ ရှာချင်တာက Component criteria ပါ။ Pipe ကို component အဖြစ်ယူလိုက်တာပါ။ Component search criteria &gt; other &gt; Piping &gt; Pipelength ကိုရွေးပါ။ (ဥပမာ. ပေ ၁၀၀၀ အထက် ပိုက်ကို ပြပါ ) ။ တစ်ခု သတိထားရမှာက logical operator မှာ Not အတွက် &lt;&gt; လိုမျိုး ပြထားပါတယ်။
Segment နဲ့ ဆွဲတဲ့နည်းကိုသုံးရင် Segment ကို Accept မလုပ်မချင်းအမှိန်နဲ့ပြပါတယ်။ ဒီတော့ မှားသွားလို့ရှိရင် &lt;R&gt; နဲ့ တစ်ဆင့်ချင်းနောက်ပြန်ဆုတ်နိုင်ပါတယ်။
Sketch မှာလည်း Move Pipe Run ကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။
Segment ချည်းပဲ ရှိနေရင် Connect to Design လုပ်လို့မရပါ။
Autoplacement နဲ့ပက်သက်ပြီး ပြောစရာရှိတာတော့ elbow ကိုတပ်လို့မရရင် Autoplace ment မလုပ်ခင်မှာ elbow ကိုအရင်တပ်ရပါတယ်။
ရှိပြီးသား ပိုက်ပေါ်မှာ Piping Speciality တွေ Pipe Assembly တွေ Fitting တွေ…အကုန်တတ်လို့ရပါတယ်။
Revise Data command မှာ confirm ခလုတ်ရှိတာကို သတိထားမိမှာပါ။အဲဒီတော့ pipeline တစ်ခုကို identify လုပ်ပြီးတိုင်း confirm သွားလုပ်မှ ရမယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။ Review Data command မှာတော့ မပါတာကို သတိထားမိမှာပါ။ ဒီတော့ pipeline တွေကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု ပြောင်းပြီး ရွေးရုံနဲ့ သိချင်တဲ့အချက်အလက်ကိုသိရတာပေါ့။ Confirm မလုပ်ရတော့ အချိန်မကုန်တော့ဘူးပေါ့။
ရှိပြီးသား ပိုက်ပေါ်မှာ Reducer တပ်မယ်ဆိုရင် concentric ကိုအရင်တပ်ပါ။ Eccentric လိုချင်လည်း နောက်မှပြောင်းပါ။ Move Pipe Run &gt; Change Eccentric to Concentric မှာ Mutually change လို့ရပါတယ်။
Reducer တပ်ပြီးသား ပိုက်မှာ reducer ကိုဖျက်ပြီး Pipe NPD ကိုပြင်မယ်ဆိုရင် သုံးရတဲ့ အဆင့် နည်းစေဖို့က move pipe assembly မှာပါတဲ့ Move by deleting pipe ကိုသုံးပါ။ အဲလိုဆို Reducer က ပိုက်အဆုံးကို ရောက်သွားတော့ ကိုင်တွယ်ရလွယ်ကူသွားတာပေါ့။
Valve မှာ Flange (or) other components တပ်ချင်ရင် Orientatin Tee ဘယ်ဘက်ကို လှည့်သလဲဆိုတာ ကြည့်ရုံနဲ့ Pipe End တစ်ခုလား component ရဲ့ အစွန်းတစ်ဖက်လားဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။
Valve တွေကို ရှိပြီးသားပိုက်မှာ ဆွဲရင် BE ဖြစ်ဖြစ် RFFE ဖြစ်ဖြစ် ရတယ်။ Instrument တွေကို ရှိပြီးသား ပိုက်မှာဆွဲရင် BE လား RFFE လားဆိုတာ တစ်ခါတည်း ရွေးပေးခဲ့ရတယ်။ Flange ရှိပြီးသားဆိုရင်တော့မလိုဘူး။ ဒီတော့ Flange ကိုအရင်ဆွဲပေါ့။ valve ကတော့ တစ်ခါတည်း တပ်လို့ရတယ်ဆိုပေမယ့် RFFE လိုတဲ့ Service Class ဆိုရင်တော့ Flange တပ်ခဲ့ဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
Move Pipe Run နဲ့ Move branch point တို့ ဘာကွာလဲ
Move Branch point က wedolet လို socklet လို boss လို branch သေးသေးအတွက် သုံးတာပါ။ Move pipe run က အကုန်သုံးနိုင်ပါတယ်။ သေးသေးအတွက်လည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။
Gate Valve ကနေ Globe Valve ကို delete မလုပ်ပဲနဲ့ revise လုပ်မယ်။
Revise componet &gt; Reconstruct component ကိုရွေး။ Component ကို identify လုပ်။ ပြီးရင် replace ကို switch လုပ်။ အသစ်ပြောင်းချင်တဲ့ component ကိုရွေး။
တစ်ခါတစ်လေ error မှာ Not found in Job specification နဲ့ Not found in Physical Library ဆိုပြီး ပေါ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်ပါလဲ။
ှရှင်းပါတယ်။ Customize group က မလုပ်ရသေးလို့ပါ။
RFFE, FFFE, RFTBE တို့က Flange လိုပါတယ်။ SW, BE, FTE က မလိုပါဘူး။
Quick Navigation Piping အင်ဂျင်နီယာပညာရပ် Top
By Ko Naing in forum ထုတ်လုပ်မှု အင်ဂျင်နီယာပညာ
Last Post: 12-26-2010, 04:46 AM
"Design of water distribution system"
By A.Hom in forum မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာအခက်အခဲများ
Last Post: 08-31-2010, 05:27 PM
Plant Flange Reference
By Htet Soe Paing in forum Piping အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်
(5)S for industrial plant
By cy in forum ထုတ်လုပ်မှု အင်ဂျင်နီယာပညာ